Club Fagnoitsy: nihena ny fampiasana ankizy | NewsMada
Club Fagnoitsy: nihena ny fampiasana ankizy
Napetraka eny anivon’ny CEG ny Club heures creuses, fikambanan’ny mpianatra amin’ny kilasy 6ème ka hatramin’ny 3ème eny anivon’ny CEG, 10 -18 taona lahy sy vavy, mivory miaraka amin’ny mpanentana mandritra ny fotoana tsy fianarana. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa vatsin’ny Koica vola ho an’ny faritra Anosy ny hetsika, nanomboka ny taona 2017.
Tanjon’ny “club” ny hampahafantatra amin’ny ankizy ny zony amin’ny maha zaza azy mba ho mora kokoa ho azy ny hampanaja azy. Amin’ny firesahana sy fampahafantarana ny zo sy ireo kazarana herisetra atao anaty “club” no ahafahan’ny mpianatra mampita ny hafatra amin’ny ray aman-dreny sy ny mpianatra namany. Fampandrasaina anjara ny ankizy manoloana ny zony sy hanohitra ny herisetra ny “club”. Handrisihana ny mpianatra hamita ny ambaratonga faharoa fototra koa ny fisiany eny amin’ny CEG. Manodidina ny 25 ny isan’ny mpianatra mpikambana amin’ny “club” iray isaky ny CEG.
Anisan’ny manana “club” ny CEG filamatra Tanambao, Taolagnaro. “Ny Club Fagnoitsy izay ahitana mpianatra 15 amin’izao fotoana izao satria efa afaka BEPC ny mpikambana sasany tao anatiny”, hoy ny taeln’ny CEG, i Karamanga Aimé Patrice, nivoaka avy amin’ny sekoly mpanofana mpampianatra.
Tsapa fa nisy voka-tsoa ho an’ny mpianatra ny fisian’ny “club”. Ny taona 2017, mbola 50 teo ho eo ny ray aman-drenin’ny mpianatra mampiasa ny zanany aloha mialoha na aorian’ny fampianarana ka niteraka voka-dratsy teo amin’ny fianaran’izy ireo. Rehefa nandeha ny fanentanana samihafa nataon’ny mpikambana ao amin’ny “club”, 20 sisa manao izany ankehitriny. Nisy fanentanana nampisehoana ny voka-dratsin’ny fampanambadiana aloha loatra ny ankizivavy, ny alarobia lasa teo, teo an-tokotanin’ny CEG. Tantara « sketch » niarahan’ny mpanentana sy ny mpianatra namolavola no nitondrana ny hafatra. “Hafa ihany rehefa mifanentana ny samy mpianatra”, hoy ny talen’ny CEG. Afaka mitondra ny olana ao amin’ny tale ihany koa raha misy ray aman-dreny manery ny zanany hanambady mialoha ny 18 taona.
Sahirana ny ray aman-drenin’ny mpianatra ao amin’ny CEG Tanambao. 120 ireo tsy mbola nahaloa ny frais généraux, 35 000 Ar. Ho fitsinjovana ny mpianatra, manohy fianarana hatrany izy ireo fa mifandamina ny roa tonta.